AFRICOM: Waxaan Duqeyn Ku Dilnay 10 Xubnood Oo Ka Tirsan Al-shabaab – Goobjoog News
AFRICOM: Waxaan Duqeyn Ku Dilnay 10 Xubnood Oo Ka Tirsan Al-shabaab
Taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Aafrica (AFRICOM) ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay weerarkii shalay Al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada Maraykanka iyo kuwa xoogga dalka ku leeyihiin deegaanka Balli-doogle ee Shabellaha Hoose iyo sidoo kale duqeyn ay fulliyeen diyaaradahooda.
Waxaa lagu sheegay qoraalkan in ciidanka Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya ay jawaab culus ka bixiyeen weerarkaasi, islamarkaana Laba duqeyn oo ay fuliyeen ku burburiyeenn Labo gaari oo ay la socdeen xubno Al-shabaab ah.
AFRICOM ayaa sheegtay in ay dileen 10 ka mid ah dagaalyahannada Al-shabaab, balse ma aanay sii faah faahin.
Dhanka kale, William Gayler oo ah Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee howlgallada u qaabilsan Qaarada Afrika ayaa sheegay in weerarkii Al-shabaab ee Balli-doogle uu muujinayo halista ay Al-shabaab weli ku leeyihiin Maraykanka iyo saaxibadiisa caalamka.
Ugu dambeyn, AFRICOM ayaa sheegtay in duqeyntii ay fuliyeen iyo sidoo kale weerarkii Al-shabaab ee Balli-doogle aanay jirin cid shacab ah oo waxyeello kasoo gaartay.
Saraakiisha Ciidanka Dowladda Oo Ka Warbixiyey Howlgallo Ay Ka Wadaan Gobolka Hiiraan
Somaliland: Loolanka Siyaasadeed ee Xisbiyada Kulmiye iyo Waddani oo Cirka Isku Shareeray
Diyaarado Dagaal Oo Duqeyn Ka Geystay Gobolka Bari, Puntland
Maamulka Deegaanka Goofgaduud Oo Ka Warbixiyay Duqeymo Ay Gobalka Baay Ka Geysteen Diyaaradaha Dagaalka Itoobiya
Oaldws zmtgqg Price cialis cialis canadian pharmacy
Qkkadj unimdm buy cialis cialis 20mg
Bjiulz kkvsti cvs pharmacy Hyhda
Baaq Loo Diray Beello Ku Dagaallamay Hirshabelle
viagra online australia paypal who has the best deal on viag...
cialis with effexor cialis paypale genereic cialis [url=http...
levitra vs cialis vs viagra buy viagra in south africa onlin...
cialis samples online buy cialis generic online 10 mg best g...
viagra overnight cheap what\_'s the difference in viagra buy...